Yiziphi izinzuzo zokusebenzisa izinto ezahlukahlukene zemishini emikhulu
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zobuchwepheshe zamakhasimende ayo ngesikhathi sokusebenza kwemishini emikhulu, umsebenzi wokusebenzela kufanele ubekwe kahle endaweni ehleliwe kuthuluzi lomshini ngesikhathi sokusetshenziswa. Ukuze ugweme okokusebenza ngesikhathi senqubo yokuchofoza. Lapho ukufuduka kuyinto ...
Yimaphi amaphuzu obuchwepheshe wokucutshungulwa kwezingxenye zomshini
Ngaphambi machining ngokunemba izingxenye auto, kubalulekile ukuqonda kahle ulwazi olufanele Shenzhen ngokunemba machining. Ngemuva kwalokho, yimaphi amaphuzu ezobuchwepheshe wokuchofoza ngokunemba? 1.Lula ukulungiswa nokugcinwa komshini, gcina abasebenzi, ukusika ngomshini kanye ne-proce ...
Njengoba sonke sazi, isizathu sokuthi ukucubungula izingxenye zokunemba kubizwa ngokuthi ukucubungula imishini kungenxa yokuthi izinqubo zokucubungula nezidingo zenqubo ziphakeme kakhulu, nezidingo zokunemba zomkhiqizo ziphakeme kakhulu, futhi ukunemba kokusebenza kwezingxenye zokunemba kufaka phakathi. ..
Ukulungiswa kwemishini kuyisigaba senqubo ejwayelekile futhi ehlanganisa konke. Ukucubungula ngomshini okukhulunywe ngakho lapha kubhekisa ngqo ezindleleni zokucubungula ezisetshenziswa ekwelashweni komphumela womphezulu. Kukhona ukugqagqana okuyingxenye ngokucutshungulwa kwemishini ku- "Forming P ...
Yiziphi izimboni okusetshenzelwa kuzo igobolondo leshidi kusetshenziswa kakhulu, futhi yiziphi izidingo ezithile?
Ukucutshungulwa kwensimbi kwegobolondo lemishini ikakhulu kubhekisa ekuqhubekeni phambili kwamapuleti aminyene ezempi, futhi kungadlala indima enhle kakhulu kule nqubo. Ngoba izingxenye zalo ezicutshunguliwe zinokuhlangenwe nakho okuthe xaxa, ngakho-ke kuyo yonke inkambu futhi idonse ukunaka kwabantu abaningi ...
Ungenza kanjani ukuthi ukucutshungulwa kwensimbi kwegobolondo lemishini kube ngcono nokuthi imiphi imininingwane okufanele inakwe
Kunezinqubo eziningi zokucutshungulwa kwensimbi kwegobolondo lemishini. Enkambeni yokukwenza, kufanele unake ngempela imininingwane yazo zonke izici, ukuze ikwazi ukubamba iqhaza elingcono. Abantu abaningi bacubungula lezi zimo ezithile. Mhlawumbe angazi okuningi nge-sp ...
Icubungula izici zamathuluzi womshini we-CNC
1. Iyavumelana nezimo Lapho kucutshungulwa umsebenzi wokusebenza omusha kuthuluzi lomshini we-CNC, ukucubungulwa kokwenziwa komsebenzi okusha kungabonakala kuphela ngokuhlela kabusha uhlelo lokucubungula lo msebenzi omusha. Lapho kwenziwa imishini yokusebenza kumathuluzi womshini we-CNC, kudingeka izinto ezilula kuphela, futhi asikho isidingo sokwenza ...